Amaanka Kismaayo oo la adkeeyey iyo ciidamada Jubbaland oo qabtay tobbanaan ruux oo la tuhmay – Radio Daljir
Amaanka Kismaayo oo la adkeeyey iyo ciidamada Jubbaland oo qabtay tobbanaan ruux oo la tuhmay
Luulyo 21, 2013 5:24 b 0
Kismaayo, July 21- 2013 – Laamaha amaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta ku kala bixiyey howgal amni xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, xili shalayto qarax miino lala eegtay ciidamada Seirra-Leone ee ka tirsan howgalka AMISOM.
Saraakiisha Jubbaland waxay sheegeen in howgalku ahaa mid balaaran oo dad lagu soo qabtay, Macalin Maxamed Ibraahim oo ka mid ah saraakiisha saxaafadu xigatay ee howgalka ka hadlay, wuxuu sheegay in ay jiraan tobbanaan ruux oo ay qabteen, balse wuxuu ka gaabsaday in uu sheego tiro rasmi ah.
Howgalka ka dhacay Kismaayo ayaa wuxuu ku qotomay baaris la xiriira falalka amni daro ee halkaas ka dhaca, sidoo kale waxaa howgalka lagu baarayey weeraro la damacsan yahay in magaalada la fuliyo, xili dhowr Qarax dheceen sitimaankii tegey.
Macalin Maxamed wuxuu iclaamiyey in howgalku yahay mid aan kala go? lahayn oo sii socon doona, wuxuu ku goodiyey in howgalka ay u adeegsan doonaan ka hortaga fal kasta oo ka dhanka ah Amniga, iyo dadka la tuhusan yahay ee jooga gobolka.
Maamulka Jubbaland sidoo kale waxay ku dhawaaqeen maanta in guddi loo saaray ilaa shan ruux oo shalayto lagu dilay magaalada xeebta ah ee Kismaayo, Mudane Maxamed oo arintaas ka hadlay wuxuu sheegay in dhowaan lagu dhawaaqi doono natiijo cad oo khuseysa dilka dadkaasi.
Laamaha caafimaadka Baqdaad Ooo shaaciyey in ay sii korortay tirada dhimasho ee weeraradii xalay
Hay?ado daryeel Oo gaaray Caluula iyo maamulka Guardafu soo dhoweeyey ansixintii shalay (Dhegeyso)